Intsapho yethu eyakhiwe ngabantu abangafaniyo yenza u-Airbnb aphumelele
Eyona njongo yethu kukwakha iqonga elingakhethi mntu kubo bonke ababuki zindwendwe neendwendwe, ibe sisoloko sizama ukuphucula.
Ukwakha ulwamkelo zindwendwe olungacaluliyo
Ababuki zindwendwe bethu banamandla okuluphelisa ucalucalulo ngokunxibelelana kakuhle nabantu.
Ihlabathi Ozivayo Ukuba Uyinxalenye Yalo
Intsapho yethu esehlabathini jikelele ihlala isimangalisa ngamabali obubele nonxibelelwano. Iphulo lethu elithi #OneLessStranger liyabalisa ngala maxesha okubonisa uvelwano nawokubonwa kweendawo ngeendawo ehlabathini.
Iibhutsi Ezindala Zithengisiwe, Kufunyenwe Uthando Olutsha
Yintsapho yethu eyenza u-Airbnb aphumelele. Eli bali lothando nelunda ngumzekelo omhle wendlela ababuki zindwendwe bethu neendwendwe ezisikhuthaza ngayo ukuba sakhe iqonga elenza abantu ehlabathini jikelele bazive bengabalapha.
Ukuba Nombono Wethu Simanyene
Olu ngcelele lwemifanekiso lukhokelwa liqela le-Black @ Airfinity namahlakani alo, nawo ayinxalenye yentsapho yethu esehlabathini jikelele, ukuze kuqaliswe iincoko ngokucalula abantu ngokwebala no-#BlackLivesMatter.
Ukuqonda ucalucalulo nokuziva ungowalapha
Enye yeendlela ucalucalulo kukuqeqesha abantu ukuba baqaphele nomkhethe abawenza bengaziboni nokuba bayawenza. Ukuze sincede amalungu ethu aqonde ucalucalulo nomkhethe oluwubangelayo, siye senza le kiti yezixhobo ezihlolisisa umkhethe nezinye izinto eziphembelela abantu xa besenza izigqibo, ngelinye ixesha bengaziva nokuziva.
Ukuthatha inyathelo kunye
Inkqubo Ka-Airbnb imela inkqubela-phambili ngokusebenzisana nentsapho yethu esehlabathini jikelele. Kulapho ke sinikisa ngezixhobo zokufunda nezokumela izinto, siphakelane izimvo noongqondo-ngqondo abaphambili, sive neendaba ngemeko yokuhlala neendwendwe kwikhaya lakho neendlela zokuthatha amanyathelo.
Ukunceda ababuki zindwendwe bethu kubenza bazive bengabalapha
Ukuqondana kubalulekile ukuze kwakhiwe u-Airbnb owamkela wonke umntu nongakhethiyo. Eyethu Indawo Yoncedo ineempendulo zemibuzo yokwenene abanayo abantu ngepolisi yethu yokungacaluli.
Sifuna ukuva kuwe
Sikhuthazwa ludlamko esilubona Iziko Lentsapho yethu, apho ababuki zindwendwe bebaliselana amabali kwaye bephakelana ngezimvo, siyayithanda kakhulu loo nto kwaye isenza sifune ukwakha iwebhusayithi ebhetele. Balisa ngento ekwenzekeleyo nawe edibene nokunxibelelana kwabantu uqa uqalise ingxoxo.
U-Airbnb uxhasa u-/dev/color, umbutho ongenzelwanga ngeniso ojongene nokuqhubela phambili iinjineli zeenkqubo zekhompyutha ezintsundu ngenkxaso yentsapho.
I-Level Leveling Field Institute izinikele ekubeni kwamkelwe wonke umntu ngokuphucula ukuphathana ngendlela echubekileyo, ukungaqhathwa kwabantu namathuba kwiindawo ekusetyenzwa kuzo.
Esebenzisana no-Out for Undergrad, u-Airbnb usebenza nebafundi baseyunivesithi abangekabi nazidanga bebalungiselela umsebenzi wokuthengisa, iteknoloji, ushishino nobunjineli.
I-Arc isebenzisana namashishini asekuhlaleni anjengo-Airbnb ukuze kunikelwe ngenkxaso yomsebenzi namathuba engqesho kubantu abakhubazekileyo ekukhuleni.
Sisebenza ne-UNCF ukuze sixhase abaphumelele ekholeji abanemvelaphi yentlupheko kuba bonke abantu baseMerika bafanelwe kukufumana imfundo elinganayo.
Intsebenziswano no-YearUp yenza ulutsha olunengeniso ephantsi lulungele imisebenzi ehlawulayo nemfundo ephakamileyo ngoqeqesho, amava nenkxaso.